UnelmaKanerva-Log ifulethi - I-Airbnb
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguUlla
UnelmaKanerva lukhetho olulungileyo lwentsapho enkulu. Indawo iyonke yi-60m2 - 45m2 kumgangatho osezantsi kunye ne-15m2 loft kumgangatho ophezulu. Sinomthamo opheleleyo wabantu abayi-8, kodwa sincoma i-cottage umzekelo abantu abadala be-4 kunye nabantwana be-2. Zonke izibonelelo, ifanitshala kunye nezixhobo zepropathi zisanda kulungiswa kwaye zenziwe zangoku.
Indawo yomlilo enkulu yendalo kwigumbi lokuhlala inika ubushushu obupholileyo nasebusika obubandayo. Kwigumbi lokuhlala eliphangaleleyo kukho itafile yokutyela yabantu abathandathu. Kukho ibhedi yesofa enebhedi ephindwe kabini kunye nebhokisi yokugcina ilinen. Ungonwabela iimuvi ezisuka kwigumbi lokuhlala le-55” ledTV. Kukwakho negumbi lokulala elahlukileyo elisezantsi elinebhedi ephindwe kabini. Ikhitshi linendawo ekumgangatho ophezulu elungiselelwe abantu abali-12, kunye nokupheka nokubhaka. I-cottage ixhotyiswe nge-dishwasher, umatshini wokumisa kunye nekhabhinethi yokomisa eyahlukileyo. Igumbi lokuhlambela lineshawari yemvula etofotofo kwaye ungonwabela umphunga opholileyo wesauna. Kwi-terrace yangaphandle egqunyiweyo ungahlala kwaye ujabulele ukuhlala kwakho, umzekelo emva kwe-sauna. I-loft ephezulu ine "Play Cave" yayo yolutsha lwentsapho kunye ne-Playstation 4 game console. Yindawo entle yabantwana kunye nabantu abatsha. Kukho iibhedi ezimbini ezingamawele kunye noomatrasi ababini abasongekayo begwebu. Kwi-cottage kukho ibhedi egotywayo kunye nesitulo esiphezulu.
I-UnelmaKanerva ibekwe kwindawo ezolileyo, umgama omfutshane ukusuka kwivenkile yokutya kunye ne-SkiBus stop. Ezinye iinkonzo zeRuka nazo zingaphantsi kwe-2 km kude. Imizila ye-snowmobile kunye ne-ski trails inokufumaneka ngokuthe ngqo kwi-cottage yard, kwaye i-sleds nayo ingagcinwa egcekeni.
Nceda uqaphele ukuba izitebhisi eziphezulu ziphezulu kwaye ubude begumbi buphantsi.
4.66 · Izimvo eziyi-41